कोरोनाविरुद्धको लडाईं : कस–कसलाई झुण्ड्याउने ? - Dainik Nepal
आइतबार, ४ जेठ २०७७
कोरोनाविरुद्धको लडाईं : कस–कसलाई झुण्ड्याउने ?
निर्मल भट्टराई २०७६ चैत २२ गते १९:०१
संसार अहिले कोरोना भाईरसविरुद्ध निर्णायक लडाईं लडिरहेछ । कोरोनाभाइरस संक्रमण सुरु भएको देश चीनले विस्तारै यसलाई विस्तारै नियन्त्रणमा लिँदैछ भने युरोप अमेरिका सबभन्दा बढी आक्रान्त छन् । ईतिहासमै यो प्रथम घटना होला जहाँ पूरै संसार ठप्प भएको होस् । बन्दाबन्दी भएको होस् ।
कोरोना नेपालमा पनि पाहुना भएर आइपुगेको छ । अध्ययन र श्रमको सिलसिलामा विदेश बसेर फर्केका केही नेपालीले कोरोनाको कोशेली बोकेर आएका छन् । नेपाल सरकारका साहसी कदमले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणकै अवस्थामा छ ।
सबै तहका सरकारको सुरुदेखिकै सजगता र सतर्कताले केही समय निरन्तरता पायो भने अब यो महामारी नेपालमा थप फैलने अवस्था छैन ।
कोरोनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मात्रहोईन, राष्ट्रिय राजनीतिको नियमित बाटो समेत बदलिदिएको छ । पार्टीको आन्तरिक र अन्तर पार्टी सम्बन्धमा पनि फेरबदल ल्याउने संकेत देखा परेका छन् । आर्थिक योजनाहरु रातारात परिवर्तन हुदैछन् ।
सरकार र जनताको प्रयास र सजगताले नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना त नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छैन तर नेपालको राजनीति चाहिँ अराजकतातर्फ उन्मुख होला कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय लामो कानूनी प्रक्रियाबाट गुज्रेर फैसलामा पुग्ने विषय हो । यो कुनै राजनीतिक स्टन्टवाजीको विषय होइन ।
अहिले कसैलाई“झुण्ड्याउने” समय होइन । अहिले सबै नेपालीलाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउने समय हो । यो महामारीबाट मुक्त भएपछि कस–कसलाई कसरी “झुण्ड्याउने” छिनोफानो हुँदै जाला ।
लकडाउनमा परेका नेता कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालको झ्यालबाट नानाथरी आधिकारिक अनाधिकारिक विषयहरु निरन्तर बाहिर फालिरहेछन् । लकडाउनमा गुम्सिएको नेपाली राजनीतिको अनौठो हरकत बाहिर आईरहेछ ।
कोरोना नियन्त्रणमा चाहिने पीपीइलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदको विषयलाई लिएर गत हप्ताको सामाजिक सञ्जालले उखरमाउलो गर्यो ।
दुई तीन दिनमै केही मन्त्रीहरुलाई सामाजिक सञ्जालले मुद्धा सिर्जना गर्यो, अदालत पुर्यायो, फैसला गर्यो ! कोरोनाको पीडामा बसेका नेपाली जनतालाई यसले संशय मात्र पैदा गरेन, मनोरञ्जन पनि दियो ।
सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम्नीको अपरिपक्वता र अकर्मण्यताका कारण सरकारले त्यो सम्झौतामात्र रद्द गरेन, उसले राखेका धरौटी पनि जफत गर्ने निर्णय गर्यो । र, नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो ।
कोरोनाविरुद्धको युद्धमा सेनाले यो जिम्मेवारी पाउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर सरकारका यो निर्णयबाट पार्टीभित्र र बाहिरका“लोकतन्त्रवादीहरु”लाई औडाहा भएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको युद्धमा सरकारलाई तोबातोबा बनोस्, राजनीतिक निर्णय र व्यवस्थापनमा अकर्मण्य सावित् हवोस् र त्यही मौका छोपेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने योजना रहेकाहरु तिल्मिलाउनु अस्वभाविक होइन ।
कतिले सहजै स्वीकार्न नसकेको तर एउटा अकाट्य सत्य के हो भने राजनीतिक विषयलाई सकारात्मक दिशामा पर्गेल्ने सवालमा नेकपाका प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवस्थापनको सवालमा नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग समकालीन राजनीतिमा कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध घनघोर आक्रमण रोकिएको छैन । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले विश्वास गर्ने भनिएका डा. बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल र केही नेकपाकै नेताहरुको आर्तनाद बाहिरिएको छ ।
संस्कृत साहित्यमा एउटा हरफ यहाँ स्मरण योग्य छ –स्थानभ्रष्टा नशोभन्ते दन्ता केशानखा नरा । अर्थात् दाँत, केश, नङ् र मान्छेले आफ्नो स्थान छोड्यो भने सुहाउदैन ।
लकडाउनको कहरको कारण पनि हुन सक्छ, यिनेगिनेका नेताकार्यकर्ता समेतले आफ्नो ठाउँ छोडेर टिप्पणी गरेको देखिदैछ ।
अरु त अरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भिष्मपितामहको दर्जामा रहेका, मिडियामा विवादमा नआउने सिद्धान्त निष्ठ वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथखनालले समेत कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा चाहिने “सामानखरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई झुण्ड्याउने”मसलेदारअभिव्यक्ति दिएछन् ।
नेपालमा बहुदल आएदेखि नै निरन्तर कानुन बनाउने ठाँउमा विराजमान उनलाई नेपालमा कसैलाई झुण्ड्याउने कानुन नभएको हेक्का भएनछ कि ?
भारतसँगको सीमामा काँडेतार लगाउन सरकारलाई अवसर
विद्या कसम– सय मदन भण्डारीहरू मर्नुपर्छ यहाँ !
लकडाउनमा बालबालिकाहरुसँग कसरी दिन बिताउने ?
लिपुलेक सडक प्रकरणमा भारतीय सैनिक प्रमुखले टिप्पणी गर्नुको अर्थ
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका शिल, कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकी सुत्केरी टोखामा बसेको पुष्टि
नेपाली सेनाका पृतनापतिमा कोरोना संक्रमण
यी हुन नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने पहिलो महिला
कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकी महिलाको शव काठमाडौं ल्याइयो, आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार
सीमामा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी पोस्टमा भारतीयकाे आक्रमण प्रयास, हवाई फायर
आज बिहान दश जनामा कोरोना पुष्टि
नर्ससहित थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण, धनकुटा र मोरङमा पहिलोपटक देखियो कोरोना
भारतीय सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति
नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्यमा केन्द्रित छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
कालीगण्डकीमा एम्बुलेन्स खस्दा चालक बेपत्ता